Waxaan haystaa xogta LiDAR - hadda maxaa? - Gofumed
Waxaan leeyahay xogta LiDAR - waxa hadda?
Luulyo, 2017 Featured, tabo cusub
In article xiiso dhawaan la daabacay by David Mckittrick, halkaas oo uu ka hadlayaa saameynta ay aqoon ku filan oo ah farsamooyinka la xidhiidha la GIS LIDAR shaqada iyo ku tilmaamayaa in Global Mapper sida qalab taageero ee nidaaminta xogta ka helay a.
Ka dib markii reading article waxaan soo bixi Global Mapper inuu u ciyaaro agagaarka, oo waa inaan qirto in haysa farsamaynta ee qalab in aan la kulmay iyo in ay ahayd habboon in lagu daydo dhul digital ka files xyz qoraalka. Maanta, marka weligiis u noqonaya sii badan la awoodi karo in ay helaan xogta LiDAR, ma xun in eegno dhinacyada si aad u tixgeliso marka la shaqeeya oo kadis ah in la xuso waxa Global Mapper si wanaagsan ayuu falaa. Taas oo aan ku adkeynayo, ayaa iga yaabisay wixii aan baaray; oo leh waji dib loo cusbooneysiiyay, barnaamijku wuxuu ku adkeeyaa fududeynta xogta furitaanka iyo muujinta talooyinka horay loo soo dhigay.
Maalintii kale, miiska Geofumadas, waxaan arki karaa indhaha Don H -mid ka mid ah tababareyaal- indho-beel indhihiisu ku dheehan tahay dalab ka yimid soo-saaraha dayuuradda; waxay ahayd codsi lagu cusboonaysiinayo xogta cadastral; iyada oo murug aad u weyn igu kaliftay inaan ka soo degsado daruur oo aan ku xasuusiyo in inta badan waddamada soo koraya aysan lahayn shuruudo ugu yar ee jiritaanka teknoolojiyadan; in kasta oo aakhirka aan gaarno is afgarad ku saabsan waxa suurta gal u ah qaab wax ku ool ah. Feejignaan la'aanta farsamadaan dhowr sano ka hor waxay dareen xoogleh ka muujisay hay'adaha dowliga ah ee Mareykanka, hadda waxaa loo wareejiyaa waddamo kale oo ka mid ah duruufaha Hispanic, oo laga yaabo inay galaan hamiga ah inay «la wareegaan mowjadda» adeegsiga tikniyoolajiyadda cusub. , qabashada xogta laakiin aan garanaynin waxa lala yeelanayo.
Haddii aan ka fiirsan kharashka in ay dalbadaan isticmaalka LiDAR in mashruuc, waana arki doonaa in ay tahay muhiim, ka fiirsaneysa waxa weeyaan bilaabin xog ururinta weyn (ka hadlaya 'Point Cloud Collection' gaar ah); xitaa garashada in adeegsigiisu uu ina siinayo natiijo wax ku ool ah iyo waqti badbaadin weyn. Si sax ah loo isticmaalo, xogta LiDAR waxay noo ogolaanaysaa in aan dunida u aragno qaab aad u kala duwan oo ka imanaya waxa aan ku gaarnay hababka dhaqanka ee khuseeya. Hadda waxaad heli kartaa aragti dhab ah iyadoo la adeegsanayo qaababka 3D iyo sidoo kale waxaad la fal-gali kartaa macluumaadka farsamooyinka falanqaynta cusub loo sameeyay.
Waa maxay LiDAR?
David aad buu u yiraahdaa: "Xogta LiDAR ma aha wax soo saarku laakiin waa qalab cayriin"Marka la eego fikradda ugu horeysa, fikradayada, si aan u fahanno mawduuca. Dhaqan ahaan, helitaanka xogta ayaa ah talada noo ogolaaneysa, ka dib markii la helo waxqabad ku filan, si loo helo noocyo kala duwan oo saddex-cabbir ah.
Haseyeeshee, si aan u caddaynno waxaan u baahanahay inaan dib u soo laabano oo aan xusno qaabka asaasiga ah iyo astaamaha xogta LiDAR. LiDAR (ereyo kooban oo loogu talagalay "Light and Range Det Detection") waa qaabka xeeldheer ee 3D. Fayl kasta ama qormo xogta LiDAR waxay badanaa ku jirtaa malaayiin, ama xitaa balaayiin dhibcood, si isdaba-joog ah loo qaybiyo oo aan kala sooc lahayn. Xidhiidhka udhexeeya ee u dhexeeya iyaga waxay ku xiran yihiin sida xogta loo helay.
Macluumaadka LiDAR ee la heli karo dadwaynaha ayaa la sameeyay, iyadoo inta badan loo maro mashiinka hawada ka baxa iyadoo la adeegsanayo farsamooyinka laysinka iyo farsamada soo dhaweynta, iyadoo la isticmaalayo codsi wadajir ah iyadoo la adeegsanayo habka saxda ah iyo hababka navigation. Qiimaha x, y, z ee ka soo baxay wakhtiga kala duwan ee lagu xisaabiyay u gudbinta iyo soo dhaweynta lafaarta laser ka muuqata ayaa loo qoondeeyey dhibic kasta.
Diyaarad A si tartiib ah duulaya abuuro daruur of dhibcood u dhaxeyso hal duulaya dheeraad ah si dhakhso ah ugu heerar sare. Iyada oo ku xidhan des shidma isticmaala diyaarada ama drone, iyo sida loo la xogta ka shaqeeyaan, waxaa lagu dari karaa sidii sifooyinka dheeraad ah, qiimaha ka mid ah midabka, xoojinta u-eegida iyo tirada celinta halkii garaaca wadnaha, la daawado iyo falanqaynta.
Maxaa la samayn karaa xogta LiDAR
In cad xogta LiDAR ah Oo Qaliin isbadal ah taas oo guud ahaan uu noqdo model 3D a, ka dibna ku hadli qarniga ah Digital Sare u qaadid Model (dem) ama, dejinta / fiirsato si toos ah dulinka diidan 3D taagayo qaababka joomateri ee shax dhibcood. Waxa kale oo suuragal, by beddelo matalaad daruurta barta, si aad u hesho macluumaad macne leh, oo wakiil ka ah noocyada kala duwan ee dusha, sare u qaadis ah ee qaraabo dhibic dhulka ku, ama kala duwanaansho ah cufnaanta ee dhibcood, ka mid ah qaababka kale.
Editing and filtering ee xogta LiDAR
Waa wax aad u badan in faylasha xogta laga helay ay ka mid yihiin dhibco badan oo ka badan kuwa loo baahan yahay. Sidaa darteed, ka hor inta aan la isticmaalin nidaamka shaandhaynta dariiqa dhibcaha, waxaa la doorbidi karaa in la baaro metadata lakabka. Qiimaynta kooban ee la helay waxay bixin doontaa macluumaadka lagama maarmaanka ah ee ku saabsan sifooyinka daruuriga ah ee soo bandhigi doona go'aan ku filan oo lagu gaaro habka shaandhaynta.
Hagaajinta tayada xogta LiDAR
Kaddib marka la tirtiro dhibcooyinka aan loo baahnayn, tallaabada xigta waa in la ogaado oo dib loo eego qodobada dhulka ee aan hore loo cayimin. Taasi waa, waa in aan nadiifino xogta. Tani waa mid aad muhiim u ah in la abuuro DEM oo ah xal wanaagsan.
Halkan waxaan ku falanqeynnaa haddii aan awoodno inaan qabano habraaca shaandhayn ku filan iyo dib u habeyn dib-u-habeyn ah. Labada hababba, farsamoyaqaan ahaan, ayaa muhiim u ah natiijooyinka la helo.
Mashruucan Caalamiga ah wuxuu si dhab ah u sameeyaa si wanaagsan. Ugu yaraan, qaabeynta iyo sahaminta filtering. Xitaa sidaas, waa in maskaxda lagu hayo in la baabi'iyo dhibcooyinka sababa buuq, waxaa jira xog lagu sifeeyay sida dusha sare ee aan macquul ahayn. By Global Mapper waa ma aha oo kaliya qubo suurto gal habboon ee dhibcood in ay yihiin meel ka baxsan baaxadda juquraafi ahaaneed ee degaanka mashruuca, laakiin sidoo kale kuwa aan loo baahan yahay by dabeecadihiisa, sababtoo ah codsiga uu leeyahay fursado badan shaandhaynta.
Haatan waxan ka hadleynaa dib uhabaynta xogta. Maabbada Global waxaa ka mid ah dhowr habab isku dhafan kuwaas oo xogta si otomaatig ah loogu qoondeeyey iyo dhibcaha dhulka ee aan hore loo tixgelinin inay yihiin dib-u-eegis la'aanta ka fogaanshaha lumista xogta faa'iido leh. Marka sidan boqolkiiba dhibcood ee dhibcaha ah ee loo isticmaali karo abuurista DEM oo leh xoojin sare.
Tusaalaha aan ka soo shaqeeyay xogta ka hor iyo ka dib duufaanta; Xaqiiqdii iyada oo aan lahayn wizzard, software wuxuu leeyahay sifooyinka ku dhow soo jeedin in hawlgalka shaqo ee helitaanka, model, filter, soo saaro model cusub.
Iyadoo la adeegsanayo qaababka kale ee si toos ah oo toos ah, dhismayaasha adeegga, geedaha iyo fiilooyinka ayaa la ogaan karaa oo dib loo habaynayaa, taas oo ah tallaabada ugu horreysa ee habka wax lagu soo saaro.
Abuurista Moodhalka Dallalka Dijital ah
Si loo fuliyo nidaamyada falanqaynta 3D, dhammaan kiisaska, dariiqa dulsaaraha LiDAR waxay u baahan doontaa xog wax ku ool ah. Waxaan u adeegsanaa habka loo yaqaan 'gawaarida' taas oo qiimaha la xidhiidha qodob kasta oo shaxan ah (badanaa qiimaha kor loo qaado) ayaa loo isticmaalaa si loo aasaaso qaabka 3D ee adag. Tilmaamahan wuxuu ka turjumi karaa oo keliya dhul (qaab muuqaal ah oo dijitaal ah) ama dusha sare ee dhulka, sida cirifka kaynta (qaab dusha sare). Farqiga u dhexeeya labada ayaa laga soo qaatay shaandhaynta iyo xulashada qodobbada loo isticmaalay in lagu soo saaro dusha sare.
Haddii aan ka fiirsan in dadka isticmaala inta badan LiDAR, waxaa lagu soo bandhigay sida Ujeedada ugu weyn ee abuuritaanka DTM ah (Digital Dhul Model), Global Mapper bixisaa ururinta ku filan oo qalab falanqaynta dhul, oo ay ku jiraan xisaabinta mugga; jarista iyo buuxinta naqshadaynta; jiilka xuduudaha; xakamaynta biyaha; iyo falanqaynta aragtida aragtida.
Ka saarista sifooyinka
Inaad awood u yeelatid inaad abuurto xog badan oo ka imanaysa dariiqa calaamada qashinka ah waxay tilmaamaysaa waddo cusub oo ku wajahan habka cusub ee loo hirgeliyo xogta LiDAR. Falanqaynta qaababka qaabdhismeedka joomatari ee meelaha xaafadaha ku yaala waxay horseedi karaan qeexitaanka moodooyinka la dhisay, kuwaas oo matalaya saddex geesood oo saddex geesood ah; xadhkaha korantada ama fiilooyinka ka gudubta dhulka, oo loo yaqaan seddex qaybood oo kala duwan; iyo sidoo kale dhibco geedo, oo ka soo jeeda qaabdhismeedka guud ee dhibcooyinka lagu qeexay sida dhirta sare. Qalabka mashiinka Global Mapper vectors waxaa ka mid ah ikhtiyaarka soo saaridda habka loo yaqaan "3D line" iyo "polygons" ka dib marka la eego aragtiyo isdaba-joog ah oo muuqaal ah oo ku saleysan habka loo cayimay. Qalabkan waxaa loo isticmaali karaa inuu abuuro qaab sax ah oo saddex-qaab ah oo ah qaab-dhismeed kasta oo la mid ah, sida cidhifka wadada ee waddada.
Gabagabadii Daa'uud waa mid cad. Haysashada xogta ma aha wax kasta oo la shaqeeya LiDAR; In aad haysato qalab kaas oo si wax ku ool ah uga shaqeynaya, waa waxa xoogga saara isticmaalka tiknoolajiyadaan.
Waa wax laga xumaado in markii ugu dambeysay ee aan arko codsigaan wuxuu ahaa 2011, oo leh qaabka 11. Waxaan horeyba ula shaqeyn jirey LiDAR balse waxa ay niyadjab ku tahay isticmaalka khayraadka, waxaan joojiyay inaan arko 13 version halkaasoo kartideeda ay fiicnayd. Waxay ku saabsan tahay download iyo waxa ay isku dayaan, maxaa yeelay taasi waxay version 18 muuqataa mid ka mid ah oo kale ugu wanaagsan ee software aan qaali ahayn in aanu ku dhowaad wax walba oo aad u baahan tahay ayaa laga yaabaa in ay ku shaqeeyaan xogta LiDAR ii.
tag Khariidadda Caalamiga ah
My aragti ugu horeysay egeomates My
Post Previous«Previous QGIS, PostGIS, LADM - in Course ee Management Land horumariyo by IGAC
Post Next Software GIS Simple: GIS by $ 25 macmiilka iyo Web server for $ 100Next »
Hal Ka Jawaaba "Waxaan hayaa xogta LiDAR - hadda maxaa?"
GIS Infomedia isagu wuxuu leeyahay: